Empresas ဘရာဇီးလ်, por မျက်နှာသာ!
အရေးကြီးသော Empresas ဘရာဇီးလ်, por မျက်နှာသာ!
1 months ago5တစ်နှစ် #921 by moisinho
eu gostaria muito က de Ter အွမ် pacote က de aeronaves da Tam (LATAM) မသန်စွမ်း Fsx, အွမ် dos melhores pacotes Que existe é o Ultimate Pack ကို 777-200ER, eu gostaria muito က de Ter Uma textura da Tam မသန်စွမ်း esta aeronave (B777-200ER) ။ တစ်ဦးက qualidade dos addons aqui ဆောပိုလိုincríveis, continuem trazendo isso မသန်စွမ်း nos! Obrigado ။
ငါသည်လည်းငါတကယ်ကဒီလေယာဉ်ပျံ (B777-200ER) အတွက်တစ်ဦး Tam texture ချင် Fsx, Ultimate Pack ကို 777-200ER အတွက်ရှိကွောငျးကိုအကောင်းဆုံး packages များတ Tam (LATAM) မှလေယာဉ်တစ်စင်း၏အထုပ်ရှိသည်။ ဒီမှာ Add-ons တွေကိုများ၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ကိုကယူလာစောင့်ရှောက်မယုံနိုင်စရာများမှာ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1 months ago5တစ်နှစ် #922 by Dariussssss
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, Rikoooo မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါဟာသင်လေယာဉ်များ pack ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုငါကြားကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ပါပဲ။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီ add-ons တွေကိုအောင်ကြသည်မဟုတ်။ ဘယ်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတစ်ခုခု add သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲစေနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အချို့သောအမှားများရှိပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်သူတို့ကို fix နိုငျသညျ, ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းပါပဲ။
ဒုတိယအချက်မှာ ... ငါသည်သင်တို့ကိုသတိပေးရန်ရှိ, ဒီအင်ျဂလိဖိုရမ်ဖြစ်တယ်, ဒါအခြားဘာသာစကားများဖြင့် post ပါဘူး။
0.249 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်